Izvo zvinokwanisika avalanche mhedzisiro yekunyunyuta nezve kutemwa kune zvinogona kudzoreredzwa | Green Renewables
Iyo yaimbove bhanga reruzhinji reGerman WestLB, rave riri rekupedzisira sangano rakamhan'ara Kumambo weSpain pamberi pe ICSID (International Center yeKugadziriswa kweMakakatanwa Ekudyara) nemubhadharo wakatemwa wemagetsi anovandudzwa unoitwa neHurumende yePP.
Nezvo, zvatove pane arbitrations dzinopfuura makumi matatu kupokana nenyika yedu mumasangano akasiyana siyana epasi rose kumatare edzimhosva akaiswa nevatengesi vekunze kuSpain: imwe, pamberi pe Uncitral (United Nations Commission); vatatu, pamberi peArbitration Institute yeStockholm Chamber of Commerce, uye makumi maviri nemasere pamberi peICSID (World Bank).
Kubva pakatanga kumhan'arwa makore matanhatu apfuura, zvichipesana nekuvandudzwa kwenzvimbo inoitwa nehurumende yaZapatero kusvikira nhasi, nhaurirano nhatu chete dzakagadziriswa. Vaviri mukati Stockholm, inofadza nyika yedu, uye imwe muICSID, ichangoburwa uye yakadai sekutaura pane ino peji rewebhu, inofarira Eiser mari yekudyara.
ICSID yakapa mhosva Spain muna Chivabvu rapfuura kubhadharisa faindi yemamiriyoni zana nemakumi masere nemana, pamwe nechimbadzo, nekuda kwekukuvadzwa kwakaitwa ayo matatu ezuva ekupisa anomera iri kumaodzanyemba kweSpain.
1 Kucheka kwakawanda pasina muripo
2 Ombudsman kununura
Kucheka kwakawanda pasina muripo
Miguel Martngel Martínez-Aroca, mutungamiri weAnpier (National Association of Photovoltaic Energy Vagadziri), inosimbisa kuti kune maviri akakosha ma nuances anosiyanisa mibairo miviri yeStockholm Court neiyo yeICSID. "Kune rimwe divi, nyaya dzeStockholm dzaitaura nezvekuvandudzwa kwechikamu chakatenderwa nehurumende yemagariro evaRodríguez Zapatero pamwe neICSID kuchinjiso ichangoburwa yePP.
Kune rimwe, uye zvakanyanya kukosha, hurumende yaZapatero yakabhadhara makore matatu ekucheka neimwe makore mashanu ichichengeta mubairo, ndokuti muripo. yaive yepamusoro pane kucheka. Zvisinei, Hurumende yeRajoy haina kuisa chero muripo wekucheka kwayo kwakanyanya.
Mr. Martínez anowedzera kuti, Iyo yekumutsiridza kukakavara yakaisa Spain seimwe yenyika nhatu pasi rose nematare ematare akamhan'arwa kwazviri. Uye chii chakanyanya kukosha, Hurumende yaigona kutarisana nemubhadharo unokwana zviuru mazana manomwe zvemamiriyoni kana kumwe kuwirirana kwacho kuchibvumirana nevatengesi. "Izvi zvaizosiya nyika yedu iine mufananidzo une hurombo."
Kune rake divi, Gurukota rezveMagetsi, Tourism uye Dhijitari Agenda, vlvaro Nadal, akataura pachena kuti idzi muripo havana hanya naye zvakanyanya, sezvo ivo vachizogara vakaderera pane iyo mari inogadzirwa nekuvandudzwa kwenzvimbo yemagetsi.
Mushure mekupokana kweICSID iyo inoshora Humambo hweSpain kubhadharisa faindi yemamirioni zana nemakumi masere nemasere, Hurumende yakabvumidza mutemo unozoshandiswa neyakawandisa magetsi kubhadhara zvakanaka sedzimwe ramangwana.
Iyi sarudzo haina kufarirwa zvachose mubato iri, mushure memakore gumi nemaviri ekushomeka, hurongwa hwacho hwakaunganidzwa kubva muna 2014 mari inosvika mamirioni gumi nemazana nemazana nemakumi matatu kusvika pagore ra1.130. Maererano nemasangano akati wandei, «Kushandisa chikamu chakawandisa kubhadhara muripo wekucheka kune vekunze vekunze zvinosuwisa.
Kune rimwe divi, mukukonana uku kune chirevo chakakomba icho vatyairi vekuSpain vasingakwanise kudzosera kudyara kwakagadzirwa mumiti inowedzerwazve nekuti Constitutional Court neDare Repamusorosoro zvakapa chikonzero kuhurumendeNepo varimi vekunze mune izvo zvakafanana zvirimwa vanogona kugamuchira muripo nekuda kwekudyidzana kwepasi rose (uko kunogona kungoshandiswa nevekunze masangano).
Mamiriro ezvinhu aya akashorwa neboka revaya vakakanganiswa pamberi paOmbudsman, uyo akakurudzira kuti Hurumende "itore matanho anodiwa kuitira kuti varimi veSpain mumagetsi emagetsi avo vakaona kutemerwa kwavo vasawana kurapwa kwakanyanya kupfuura varimi vanobva kunyika dzakasaina. Chibvumirano pane Energy Charter.
Uye zvakare, inofanirwa kumisikidza nzira dzinoonekwa dzakakodzera kubhadhara chibairo chimwechete icho shanduko yemubhadharo inoreva kune vashandi. Vatengesi veSpain".
Nezvekupokana kwenyika, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iwo anononoka maitiro uye kuti zvisarudzo zvavo ndezvekupedzisira. Munyaya ye ICSID, makumi maviri neshanu emakumi maviri neshanu nyaya dzakatotara dare rinoenderana, rakaumbwa nemutungamiriri wenyika nevapemperi vaviri, mumwe akasarudzwa nebato rega rega. Vose vatatu vanobva kunyika dzakasiyana uye dzakasiyana. Mari ye ICSID arbitration, yakapa chikonzero kuBritish Eiser, yaisvika 900.000 euros, iyo 255.000 yaienderana nemutungamiriri wedare, American John Crook, 163.000 euros kune mutongi weBulgaria Alexandrov, uyo akatsigira mumhan'ari, uye 114.000 kuNew Zealander McLachlan, uyo akatsigira zvido zveHumambo hweSpain.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Iwo anogona kuitika avalanche mhedzisiro yezvichemo pamusoro pekucheka kune zvinowedzerwazve
8000 bhiriyoni mukudyara kutsva mukati mezve nyika inogadziriswa